मोदी सरकार दुईको बजेटका कारण नेपालमा समपूरक बजेट आउने आशंका - Jhilko
काठमाडौ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा दोस्रो पदावधिका लागि गठन हुने सरकारले ल्याउने पूर्ण बजेटका कारण नेपालको समग्र बजेटलाई परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गरेको एक दिन पछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दोस्रो पदावधिका लागि पाकिस्तान बाहेकका सार्कका सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख लगायतका मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सपथ लिने भएका छन् ।
सपथ ग्रहण समारोहमा ं नेपाल, भूटान, मारिससका प्रधानमंत्री, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमारका राष्ट्रपति, थाईल्याण्ड, किर्गिस्तानका प्रमुख सामेल हुने भएका छन् । यो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो गरिएको छैन् ।
२० नयाँ अनुहारका साथ ६५ मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्ने गरी मोदीले सपथ लिन लागेको भारतीय स्रोतहरूले जनाएको छ । २०१४मा ४५ मन्त्रीको सपथ गराइएको थियो ।
यो कार्यक्रममा सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई निम्तो गरिएको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले समारोहमा उपस्थित नहुने जनाएकी छिन् ।
तर युपीएकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी र पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले निम्तो स्वीकार गरेका छन् ।
पार्टी नेतृत्वको पदावधि समाप्त हुने भएकाले भाजपा अध्यक्ष अमित शाहलाई यो पटक मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्ने सम्भावना बढेको छ भने वित्तमन्त्री अरूण जेटलीको सामेल हुने सम्भावना कम भएको छ ।
जेटलीले आफू स्वास्थ्य जाँचका कारण समय दिन नसक्ने भएको जनाउँदै मन्त्रीमण्डलमा सामेल नगर्न आग्रह गरेको पत्र मोदीलाई बुझाएका छन् ।
विदेशमन्त्री सुष्मा स्वाराज पनि सामेल हुने वा नहुने त्यसबारे स्पस्ट हुन अझै बाँकी रहेको छ । जेटली सामेल नभए उनले नेतृत्व गरेको वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अध्यक्ष शाहलाई तोकिने देखिएको छ ।
मोदीका पुराना टोलीका सहभागी हुने झण्डै तय भएका नामहरूमा गृह मंत्रालयका लागि राजनाथ सिंह, विदेश र रक्षा मंत्रालयका लागि नितिन गडकरी व निर्मला सीतारमण, रेल मंत्रालयका लागि पीयूष गोयल र स्मृति ईरानीलाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयको जिम्मा दिइने स्रोतको दाबी रहेको छ ।
मोदी नेतृत्वको यो सरकारले सपथ ग्रहण लिए पछि यसअघि ल्याएको अन्तरिम बजेटको ठाउँमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने छ ।
त्यो बजेटमा अहिलेको भन्दा फरक खालको बजेट आयो र भारत नेपाल बीचको व्यापारमा असर पर्ने गरी प्रावधानहरू राखिए नेपालको बजेटमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई इन्कार गर्न नसकिने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
भारतको आउने पूर्ण आकारको बजेट प्रभाव पार्ने खालको आएमा नेपालको बजेटमा परिमार्जन गर्न समपूरक वा परिपूरक बजेट आउन सक्ने डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जनाएका छन् ।
उनले भने “ भारतले अहिले अन्तरिम बजेट ल्याएको छ । पूर्णकालीन बजेट आएको छैन् । उसले प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्यायो भने समपूरक वा परिपूरक बजेट ल्याउन सक्ने हुन्छ ।”
मोदीको पहिलो सपथ ग्रहणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपस्थित भएका थिए भने यो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरिक हुने भएका छन् ।
‘व्यापार विवाद चर्काउनु नाङो आर्थिक आतंकवाद’–चीन
यसकारण भयो शेयर बजारमा करेक्सन
शेयर बजारमा सस्तोमा किनेको शेयरहरुले समेत राम्रै नाफा दिन साथलेपछि नाफा बुक गर्न...